सावधान ! चिन्ताले ग्यास्ट्रिक हुन्छ – Sabaikoaawaj.com
सावधान ! चिन्ताले ग्यास्ट्रिक हुन्छ
बुधबार, साउन २९, २०७६ 8:38:56 AM	मा प्रकाशित
खानपानको असन्तुलनबाट ग्याट्रिक पैदा हुन्छ । यस अतिरिक्त तनावका कारण पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ । त्यसैले खानपान र तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भोको पेट बस्नुहुँदैन । पेटको समस्या छ भने व्रत पनि बस्नुहुँदैन । पानी पर्याप्त पिउनुपर्छ । यति कुरामा निकै ख्याल राखे पनि यदि पेटमा ब्याक्टेरियाको संख्या निकै बढेको छ भने त्यसले घाउ बनाएरै छाड्छ । यसका लागि औषधिबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । यस अतिरिक्त तनाव र पेटको निकट सम्बन्ध छ । पाचन प्रणालीका सबै भाग पेटमा नै हुन्छन् । अन्य अंगको तुलनामा तनावले पाचन प्रणालीमा धेरै असर गर्छ । तनावकै कारण टाउको र पेटमा दुखाइ बढ्न थाल्छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २९, २०७६ 8:38:56 AM